Wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka Itoobiya oo duqeyn culus ku billaabay Mekelle - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka Itoobiya oo duqeyn culus ku billaabay Mekelle
Wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka Itoobiya oo duqeyn culus ku billaabay Mekelle
Mekelle (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya magaalada Mekelle ee degaanka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in duqaymo dhanka cirka ah oo ay ay fuliyeen ciidamada cirka ee Itoobiya ay ka dhaceen magaalada Mekelle.
Duqayntan ayay ciidamada cirku u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare badan.
Duqayntan maanta ka dhacday magaalada Mekelle ayaa kusoo hagaagtay iyadoo Afhayeenka TPLF Getachow Reda uu maanta sheegay in haddii xal kama dambays ah la helin ay qaadi doonaan hawlgallo adag.
Wali waxaan joogsan dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF, iyadoo haatan uu dagaalku u badan yahay dhanka degaanka Canfarta, oo ay ka barakaceen shacab aad u tiro badan, kuwaas oo ka cararaya dagaalada u dhaxeeya TPLF iyo ciidanka gaarka ah ee degaanka Canfarta.
Dagaalka Itoobiya oo socdo ku dhawaad hal sano ayaan weli wax natiijo ah laga gaarin, waxaana muuqata hadda inuu fashilmay wada-hadaladii u dhaxeeyey dhinacyada is haya.
Xiisadda udhaxeysa dowladda Federaalka iyo gobolka Tigrayga ee ay hogaamiso kooxda TPLF ayaa bilaabatay kadib markii raiisul wasaare Abiy uu xukunka qabtay bishii April 2018.
Abiy wuxuu ku dhawaaqay khilaafka dabayaaqadii bishii Nofeembar, balse dagaalka wuxuu socday tan iyo markii la qabtay doorashooyinka qaran ee 21 Juun.